Aqoonta noolaha shinnida
Baro shabakada isdhexgalka kakan ee ka dhexeeya shinnida, dhirta, dadka iyo dhulka
Faham sida hiwaayadda iyo xirfadleyda shinni u shaqeeyaan, siyaabaha ay u tarmaan ama u soo saaraan jelly royal
Aqoonso khataraha ku miisaamaya shinnida iyo habka xakamaynta ee jira
Soo ogow waaxda dhaqashada shinnida iyo suuqa malabka.
Shinnidu waxay labadooduba lama huraan u tahay wax-soo-saarka beeraha ee ku dhawaad ​​70% noocyada la beeray iyo mid ka mid ah dhibbanayaasha ugu horreeya ee dhaq-dhaqaaqa beeraha degdega ah. Waa isbarbar-dhiggan laakiin sidoo kale dhammaan kakanaanta xidhiidhka ka dhexeeya shinnida, dhaqashada shinnida iyo beeralayda ayaa MOOC Bees iyo Deegaanku sahmiyaan.
Waxaan ogaan doonaa bayooloojiyada shinnida, gaar ahaan tan shinnida gudaha, nooc cajiib ah oo awooday in ay ilaaliso hab-nololeedka duurjoogta ah iyada oo ay tahay mawduuca aadamiga. Waxaan arki doonaa arrimaha kala duwan ee saameeya caafimaadkiisa, hadday yihiin kiimiko ama bayooloji. Waxaan sharxi doonaa ku-tiirsanaanta xooggan ee ka dhexeeya caafimaadka shinnida iyo helitaanka kheyraadka ubaxa iyo deegaanka, gaar ahaan deegaannada beeraha.
Tusaalayaal badan, waxaad ogaan doontaa sida beeralayda u korin karaan shinnidooda si ay u soo saaraan malab iyo jelly royal, laakiin sidoo kale pollination ee dalagyada. Markhaatiyadu waxay dib u xasuusan doonaan in dhaqashada shinnida Faransiisku ay tahay dhaqdhaqaaq dhaqaale oo ay tahay inay wajahdo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka iyo tartan caalami ah oo xooggan. Awoodeeda ayaa ah tayada iyo asalka wax soo saarka gobolka.
Mid kasta oo ka mid ah mawduucyadan, aqoonta sayniska ee la xasiliyay iyo sidoo kale waxa laga doodayo ayaa la soo bandhigi doonaa oo laga doodi doonaa.
READ 5 Hacks si loogu kasbado Macaamiisha YouTube-ka
MOOC Bees iyo deegaanka Diisambar 9, 2021Tranquillus
socdaDaryeelka xoolaha beeraha
Xeerka shaqada dhijitaalka ah: horeba in ka badan toban milyan booqasho!